Allgedo.com » 2012 » August » 04
Home » Archive Daily August 4th, 2012 Press Release: Resignation of the Minister of Fisheries, Marine Resources and Ports of Galmudug State, Hassan M. Said Samantar “Gacaliye” Aug 4, 2012 Hassan M. Said Samantar “Gacaliye”, resigned Minister of Fisheries, Marine Resources and Ports of Galmudug State.
Galmudug State of the Somali Repubic Ministry of Fisheries, Marine Resources and Ports Office of the Minister Mogadishu, August 4, 2012 PRESS RELEASE After seeing how the situation in the Galmudug State of Somalia has deteriorated at an alarming pace, after acknowledging the... Ugaaska beesha Sade, Ugaas Maxamed Ugaas Cumar Ugaas Xirsi oo si weyn u dhaliilay hab dhaqanka dowladda KMG ah ee Soomaaliya ee uu waqtigeedu sii dhamaanayo. Aug 4, 2012 Read More → Prof. Maxamed Cumar Dalxa “ Baarlamaanka cusub waa inuu noqdaa mid xaaladda dalka wax ka bedili kara” Aug 4, 2012 Prof. Maxamed Cumar Dhalxa oo ka mid ah mudanayaasha Baarlamaanka ee ugu aqoonta badan ayaa sheegay in Madaxdhaqameedyada la siiyo madaxbannaani ay ku soo xulli karaan Baarlamaan tayo leh.
“ Haddii ay jirto in odayaasha dhaqanka lagu hayo faragelin, arintaasi waa meel kadhac weyn, waanna in ay caddeeyaan madaxdhaqameedyadu cidda faragelinta ku hayso” ayuu yiri Prof Dalxa isagoo aad u caraysan.
Waxaa... Abaanduulaha ciidamada xooga dalka Soomaaliya oo sheegay inay ku wajahanyihiin magaalada Marka (DHAGEYSO) Aug 4, 2012 General C/kariin Yuusuf Aadan (Dhega badan) ayaa mar uu faah faahin dheeraad ah ka bixinaayay howlgaladii ay maanta kula wareegeen deegaano ka mid ah Sh/hoose, waxa uu sheegay inay ku wajahyihiin magaalada Marka ee xarunta gobalkaasi.
Abaanduulaha waxa uu sheegay inay la wareegeen deegaano badan oo Shabeelaha Hoose ka mid ah, waxaana uu tilmaamay in xilliyada soo aadan ay gaari doonaan meelo kale... Aug 4, 2012 Howlgalo ayaa maalmahaan ciidamada dowladda TFG iyo kuwa AMISOM waxay ka sameeyeen inta u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye halkaa oo maalmahaan dambe amaan dari ay ka taagneed.
Saraakiisha dowladda TFG ayaa sheegay in howlgalkaasi ay kusoo qab qabteen rag badan oo ku labisan dareeska ciidamada dowladda dhacna u geysanaayay dadka shacabka ah.
Sidoo kale waxa jirta in howlgalkaasi la sheegay inay ku geeriyoodeen... Dagaal ka dhacay degmada Qansax dheere ee gobalka Bay, iyo dowladda TFG oo guulo ka sheegatay dagaalkaasi, Aug 4, 2012 Dagaal u dhaxeeyay ciidamada dowladda TFG oo kaashanaayay kuwa Itoobiya iyo Al-shabaab oo dhan ah ayaa ka dhacay degmada Qansax dheere ee gobalka Bay waxaana dagaalkaasi guulo ka sheegtay maamulka degmadaasi ee dowladda TFG.
Ciidamada Al-shabaab oo aad u badan ayaa weerar qorsheesan waxay ku qaadeen degmada Qansax dheere waxaana dagaalkaa ku dhintay 8 qof oo dhinacyada dagaalamay ah.
Aadan Cabdi... Saxiixayaasha Road Map-ka oo la kulmay xoghayaha arimaha dibada dalka Mareekanka Hillary Clinton. Aug 4, 2012 Xoghayaha arimaha dibada dalka Mareekanka Hillary Clinton ayaa maanta magaalada Nairobi ee caasimada wadanka Kenya waxay kula kulantay Saxiixayaasha Qariirada nabadda waxaana ay ka wada hadleen arimo aad u badan.
Hilary Clinton ayaa sheegtay ugu horeen in ay aad ugu faraxsantahay is bedalada Soomaaliya ay ku talaabsaneyso iyo waliba hanaanka loo ansixiyay dastuurka cusub ee Soomaaliya waa sida ay hadalka... Maareeyihii Garoonka Aadan Cade ee Magaalada Muqdisho oo caawa lagu dilay degmada X/weyne ee magaalada Muqdisho. Aug 4, 2012 Ibraahim Iimaan Xalane oo ahaa maareeyihii Garoonka Diyaaradaha Aadan Cade ee magaalada Muqdisho ayaa caawa salaadii maqrib ka dib waxaa lagu dilay degmada X/weyne ee magaalada Muqdisho.
Dilka ayaa waxaa geestay rag ku hubeesan bistoolado sida ay inoo xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada X/weyne ee gobalka Banaadir.
Ragii dilka ka dambeeyay ayaa halkaasi ka baxsaday iyagoona ku cararay... Ciidamada TFG oo la wareegay deegaano ka mid ah gobalka Shabeelaha Hoose. Aug 4, 2012 Ciidamada dowladda TFG oo garab milatari kahelaaya kuwa AMSIOM ayaa saaka la wareegay garoonka Lambar 50 ee gobalka Shabeelaha Hoose, ka dib iska hor imaad dhex maray iyaga iyo ciidamada Xarakada Al-shabaab.
Ciidamadaana ayaa saaka ka jarmaaday dhanka deegaanka Laanta Buuro oo maalmo kahor ay la wareegeen ciidamada dowladda TFG iyo kuwa AMISOM, waxaan haatanay ciidamada kusii wajahanyihiin deegaano... Hillary Clinton oo Uganda ku wareejisay 12 Diyaarad oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn si loogula dagaalamo Al-shabaab. Aug 4, 2012 Xoghayaha arimaha dibada wadanka Mareekanka Hillary Calinton oo Afrika Booqasho ku mareysa ayaa ciidanka AMISOM waxay ugu deeqday 12 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay ugu adeegsadaan howlgaladooda.
Xero ciidan oo ku taala dalka Uganda oo maanta munaasabad ka dhacday ayaa la sheegay in Hillary ay ku wareejisay AMISOM gaar ahaan Uganda diyaaradahaan.
Halka wareejinta ay ka dhaceysay waxaa ku sugnaa... Radio Allgedo/ Waraysiyo